Vaovao - ny orinasam-pifandraisana an-tampon'ny vovonana dia nanatevin-daharana ny fampiratiana indostrialy vonjy taitra iraisam-pirenena china faha-3 (shenzhen) tamin'ny 9.18-.9.20
Summit orinasa mpamokatra vokatra medaly nanatevin-daharana ny fampiratiana indostrialy vonjy taitra iraisam-pirenena china faha-3 (shenzhen) tamin'ny taona 9.18-.9.20
Summit Medical Products Co., Ltd. Joined ny 2020 3RD Expo momba ny indostria vonjy taitra iraisam-pirenena Shina (Shenzhen)
Ny endrika lolo vaovao Sarontava KN95, saron-tava azo ampiasaina tokana(samy ho an'ny lehibe sy ny ankizy), boaty fitahirizana sarontava, ampinga, kitapo vonjy taitra, nahasarika mpanjifa marobe
Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2020, ny COVID-19 dia nitondra fanamby mbola tsy nisy toa izany tamin'ny filaminan'ny fahasalamam-bahoaka manerantany. Ary koa nisy fiantraikany tamin'ny lamina fampandrosoana ny Fitaovana Iraisam-pirenena momba ny fitsaboana.COVID-19 dia raisina ho iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra ho an'ny firenena rehetra. Mba handresena ny ady amin'ny ady amin'ity virus vaovao ity dia nitana andraikitra lehibe i China sy ireo orinasan-tsoroka fisorohana ny valan'aretina hiadiana amin'izany. Izahay, Summit Medical Products Co., Ltd, dia mahatsiaro ho voninahitra ho iray amin'ireo orinasa ireo izay nanampy tamin'ny fisorohana sy fanaraha-maso an'ity valanaretina eran-tany ity.
Tamin'ny septambra 18, nisokatra tao amin'ny Convention Convention and Exhibition Center ny fampirantiana indostrialy vonjy taitra iraisam-pirenena (China) fahatelo an'ny China. Nanao fanomanana mavitrika izahay hanatevin-daharana an'ity hetsika lehibe ity ary hampiroborobo ny fampandrosoana ara-pahasalamana ireo indostria vonjy maika.
Tena nahomby ilay fampirantiana. Ny saron-tsofina lolo vaovao KN95 saron-tava, saron-tava azo ampiasaina tokana, boaty fitahirizana saron-tava, ampinga tarehy, kitapo fanampiana vonjy taitra nahazo laza malaza. Ary nahazo fanontanian'ny mpanjifa vaovao maro izahay ary misy ny mpanjifa nametraka baiko.